Bilaashka Coronavirus waa 15 Dal oo ay ku jiraan 10 Jasiiradaha Jasiiradaha | Wararka Diyaaradaha
Bogga ugu weyn » Wararka Diyaaradaha » Bilaashka Coronavirus waa 15 Dal oo ay ku jiraan 10 Island Nations
Bilaashka Coronavirus waa 15 Dal oo ay ku jiraan 10 Island Nations
Waa kuwee dalalka adduunka ee aan weli haysan cudurka loo yaqaan 'coronavirus' - waana maxay sababtu iyo WAA MAXAY? 15 dal oo ku yaal Afrika, Aasiya, iyo Gobolka Baasifigga ma lahan caabuq COVID-19 ah.
Go'doominta iyo maqnaanshaha Dalxiiska ayaa fure u noqon kara waddamada in aysan dhibbane u noqon cudurka halista ah ee loo yaqaan 'coronavirus epidemmis' oo laga diiwaan geliyey 209 dal iyo dhulal.
Iyadoo 1,364,566 la soo sheegey kiisaska Coronavirus iyo 74,697 oo qof oo dhintey, weli waxaa jira 15 dal oo ku kala yaal 3 qaaradood ee adduunka oo aan soo sheegin kiisas fayras dilaa ah.
9 ka mid ah 15-ka dal waa quruumaha ku yaal Badweynta Baasifigga. Waxay muujin kartaa go'doomin u muuqataa inay tahay habka ugu fiican ee looga hortagi karo fayraska. Waxaan rajeyneynaa, meelaha la tago sida Hawaii inay wax ka baran karaan oo ay joojin karaan ogolaanshaha duulimaadyada inay ka yimaadaan USmainland ama Aasiya.
Qaar ka mid ah wadamada kale oo ay ka mid yihiin Kuuriyada Woqooyi, Tajikistan ama Turkmenistan waa umado caan ku ah inay go'doon yihiin oo aan lagu aqoon dalxiis baahsan.
Ilaa hadda dalalka soo socda waa ka xor COVID-19
In kasta oo adduunku la dagaallamayo cudurka loo yaqaan 'coronavirus' iyo waddamo badan oo ka mid ah ayaa la xiray, Turkmenistan waxay qabanaysaa isu soo bax ballaaran oo baaskiil ah oo lagu xusayo Maalinta Caafimaadka Adduunka ee Talaadada.
Dalka Bartamaha Aasiya wuxuu ku andacoonayaa inuu wali leeyahay eber kiisaska coronavirus. Laakiin miyaan ku kalsoonaan karnaa tirooyinka ay soo bandhigtay dowlad caan ku ah faafreebka?